संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बजेट - Karobar National Economic Daily
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बजेट
query_builderJune 1, 2017 9:52 AM supervisor_accountडा. बद्री पोख्रेल visibility768
यस पटकको बजेट खर्चको परम्परागत विवरण मात्र नभएर संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख कडी पनि हो । संघीयता जनचाहनाको द्योतकका रूपमा नेपालको राजनीतिमा नयाँ प्रयोग गरिएको प्रणाली हो ।
संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रमुख दुई आधार चाहिन्छ— (क) जनचाहना र (ख) वित्तीय सम्पुुष्टि । सार्वभौम संसद्ले नेपाललाई एकात्मक राजतन्त्रबाट संघीय शासन प्रणालीमा लैजाने गरी निर्णय दिइसकेकाले जनचाहनाका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने कुरा भएन ।
यद्यपि नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको निर्णय सर्वसम्मत रूपमा नभएर बहुमतीय प्रणालीबाट भएको थियो ।
संघीयतालाई बलियो बनाउने अर्को आधार वित्तीय सम्पुष्टि हो ।
नेपालको शासन व्यवस्था अहिले (चालू आव) सम्म एकात्मक केन्द्रीय राज्य प्रणालीमा आधारित भएकाले नवघोषित स्थानीय र प्रान्तीय सरकारहरू बजेट परिचालन (आम्दानी र खर्च, दुवै) गर्ने अनुभवबाट टाढा थिए । केवल सिंहदरबारको निर्देशन र नियन्त्रणमा दिएको रकम खर्च गर्थे ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्र सरकारका अतिरिक्त संवैधानिक स्वतन्त्रता भएका प्रान्तीय र स्थानीय सरकार बनिसकेको हुँदा अहिले राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र (अटोनोमी) भएका नयाँ सरकारहरू पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न र विकास अभियान अगाडि बढाउन अधिकारसम्पन्न भएका छन् ।
यी निकायहरूलाई सफल बनाउन सन्तुलित वित्तीय स्रोत आवश्यक र अपरिहार्य हुन्छ । स्थानीय र प्रान्तीय सरकारमा वित्तीय स्रोतको भरपर्दो विकल्प नहोउन्जेल केन्द्र सरकारले दिने र दिएको रकममा सीमित हुनुपर्ने भएकाले राजनीतिक रूपमा प्राप्त अधिकारको प्रयोग कतिसम्म हुन सक्छ, चुनौतीको विषय बन्छ ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटलाई यही कोणबाट हेरेर राम्रो÷नराम्रो वा परम्परागत÷समयसापेक्ष रूपको भनेर तुलना गर्न सकिने हुन्छ । बजेट प्रस्तुतिका शैली परम्परागत नै छन्, तर बजेट भाषणमा नयाँ बजेटले संघीयता कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि जम्मा रु. १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजारको बजेट सार्वजनिक भएको छ । यो विनियोजनलाई चालूतर्फ रु. ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार (६२.८ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार (२६.२ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार (११ प्रतिशत) मा विभाजन गरिएको छ । यो बजेट चालू आवको विनियोजनको तुलनामा २१.९ प्रतिशत बढी छ ।
व्यक्तिले जस्तै गरी सरकारले पनि आम्दानी नगरी खर्च गर्न सक्दैन । आगामी वर्ष सरकारले गर्ने आम्दानीका स्रोतहरू राजस्वबाट रु. ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार, सावाँ फिर्ताबाट रु. १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार हुने आकलन गरेको छ । नपुग (न्यून) हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड ५४ लाख २९ हजार, रु. १ खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण र रु. १ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार चालू आवमा खर्च हुन नसकेको नगद मौज्दातबाट बेहोरिने जनाएको छ ।
आम्दानीको स्रोत र न्यून रकम
स्थानीय निकायहरू गठन हुने क्रममा छन् । प्रान्तीय रूपमा रहेका सातमध्ये तीन प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि बाँकी चार तहमा निर्वाचन हुन बाँकी छ । आशा गरौँ, चालू वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिहरू चुनिनेछन् ।
सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त हुनेछ, तर संवैधानिक स्वतन्त्रतालाई कार्यान्वयन तहमा लैजान पढेलेखेका र सुझबुझ भएका जनप्रतिनिधि र अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । शैक्षिक योग्यता नचाहिने अवस्थामा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि र पञ्चायती शैली र प्रणालीमा नियुक्त भएका कर्मचारीबाट संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भने अवश्य नै देखिन्छ ।
अर्कातर्फ, बजेटको आकार निकै फराकिलो भएको छ । काम चलाउन सरकार भनिए पनि बजेट विनियोजन गर्ने उदारतामा कमी आएको छैन । मौद्रिक स्थिरता, पुँजी बजारको अवस्था, तरलता र खर्च गर्ने क्षमतालाई नयाँ बजेटले उपेक्षा गरेको छ । वास्तविक मुद्रास्फीति सरकारी आँकडाभन्दा धेरै माथि छ । वस्तुको भन्दा सेवाको मूल्य बढ्ने प्रवृत्ति तीव्र छ । सार्वजनिक खरिद ऐन योजना कार्यान्वयनका लागि बाधक भएको भनिए पनि संशोधन हुन सकेको छैन ।
आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को चुनौती हो । उत्पादनका साधनहरूमाथि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी सहकार्यबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हो । यसको विकल्प पनि छैन । यस्तै उचित बजार व्यवस्थापन गरी आन्तरिक र बाह्य बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अर्को चुनौती पनि सँगसँगै छ ।
बजेट भन्नेबित्तिकै आम्दानी र खर्चका दुइटा पाटाको फेहरिस्त भन्ने बुझिन्छ । कुन–कुन स्रोतबाट कति–कति रकम प्राप्त हुने र कुन–कुन क्षेत्रमा कति–कति रकम खर्च हुने भन्ने नै बजेटका दुइटा मुख्य सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पाटा हुन् ।
यो बजेट केन्द्र सरकारको बजेट भएकाले केन्द्र सरकारले गर्ने आम्दानी र त्यसका स्रोतहरू एवं केन्द्र सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत गर्ने खर्चको तालमेल र व्यवस्थापन बजेटमा हुनुपर्छ ।
हो, बजेटले आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट गरेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याएर दिगो समावेशी र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने सोच बजेटले लिएको छ । यो उद्देश्य हासिल गरेर तीनै किसिमका राज्य प्रणालीबाट प्रदान गरिने सेवामा आमनागरिकको पहुँच वृद्धि हुने परिकल्पना पनि नयाँ बजेटको छ ।
बजेट खर्चका अड्चनहरू
यस पटकको बजेटले पनि परम्परागत बजेटले जस्तै प्राथमिकता स्पष्ट नगर्ने र रकम छर्ने कुराको पुनरावृत्ति गरेको छ । संशोधित अनुमानको खर्चभन्दा झन्डै ४० प्रतिशत रकम बढाएर बजेट बनाइएको छ ।
काम चलाउ सरकारले ल्याएको बजेटले अब आउने सरकारलाई नयाँ काम गर्न समस्या बनाइदिएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट खर्च कसरी हुन्छ भन्ने पहिचान र सिफारिस केही छैन । कर्मचारी संयन्त्र सरकारका तीन तहमध्ये को कहाँ रहने स्पष्ट छैन । कर्मचारी वर्ग स्वयं अन्योलमा छ ।
कुल बजेटको आकार संरचना हेर्दा दुईतिहाइजति (६३ प्रतिशत) चालू खर्च हुने देखिन्छ भने कुल बजेटको एक चौथाइ मात्र (२६ प्रतिशत) पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको छ । बाँकी ११ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन÷ऋण भुक्तानीमा खर्च हुन्छ । कुल बजेटको एक चौथाइ खर्चबाट ७.२ प्रतिशतको अपेक्षित विकास दर कसरी हासिल हुने हो, आधार देखाइएको छैन ।
गत वर्षको विनियोजन रकम खर्च नभएको तथ्यलाई उपेक्षा गरेर ३६/३७ प्रतिशत बजेट बढाउनु वित्तीय सिद्धान्त अनुकूल पनि होइन । यसले मूल्य वृद्धि र मुद्रा अवमूल्यनलाई सघाउन पुग्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि चालू बजेटको सकारात्मक पक्ष भनेको संघीयता कार्यान्वयनलाई टेवा पुग्ने गरी स्थानीय निकायलाई निःसर्त र ससर्त रकम हस्तान्तरणको आरम्भ गर्नुु हो ।
बजेटको आकार यति धेरै नबढाईकन स्रोत हस्तान्तरणको थालनी गरेको भए नयाँ बन्ने सरकारलाई नयाँ काम गर्न बाधा नपर्ने, मूल्यवृद्धि कम हुने, रकमको उत्पादकत्व बढी हुन सक्थ्यो, कामचलाउ सरकारको आर्थिक अनुशासन पनि देखिन्थ्यो । यिनै कुराले बजेटको सफलतामा आज मात्र होइन, भोलि पनि शंका र चर्चा हुने पक्का छ ।